Propars Blog- E-commerce အကြောင်း အားလုံး။ | E-Export ကို ထောက်ခံသည်။
Propars Blog- E-commerce အကြောင်း အရာအားလုံး။
Amazon Enhanced Producer Responsibility (EPR) ဆိုတာ ဘာလဲ။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး e-commerce ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည့် Amazon သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ရောင်းချသူများသည် Enhanced Producer Responsibility (EPR) နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ကြေညာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်...
မတ်လ 15 2022
2021 ဥရောပ E-Commerce အစီရင်ခံစာ
Propars အဖွဲ့အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာသေးမီက ချန်ထားခဲ့ခဲ့သော 2021 ခုနှစ်တွင် ဥရောပ e-commerce စျေးကွက်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို သင့်အတွက် စုစည်းထားပါသည်။
28 ဇန်နဝါရီ 2022
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းကမ္ဘာနှင့် အင်တာနက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ၊ ယခုအခါ လုပ်ငန်းတိုင်းကို နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းချရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ နိုင်ငံခြားငွေရောင်းအားဖြင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကို TL သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် အကဲဖြတ်ကာ ဖောက်သည်များ ပိုမိုရောက်ရှိခြင်း၊ စျေးကွက်သစ်များဖွင့်လှစ်ခြင်း...
4 ဇန်နဝါရီ 2022
Omnichannel နှင့် Multichannel Marketing ဟူသည် အဘယ်နည်း။ သင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် မည်သည့်အရာက ပိုထိရောက်သနည်း။
Omnichannel နှင့် Multichannel စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကို တူရကီဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကြားက ခြားနားချက်ကို နားလည်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းက သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ပါ...
အောက်တိုဘာလ 11 2021
E-commerce တွင် သင်၏ ငွေ၊ ရွှေနှင့် စိန် လက်ဝတ်ရတနာများ ရောင်းချခြင်းတွင် အောင်မြင်မှု ရယူလိုက်ပါ။
သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော ဤဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးနောက်၊ သင့်အွန်လိုင်းလက်ဝတ်ရတနာစတိုးကို ဖန်တီးရန်၊ သင့်ငွေ၊ ရွှေနှင့် စိန်လက်ဝတ်ရတနာများကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို သင့်တွင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လက်ဝတ်ရတနာ အမျိုးအစားထဲမှာ ဘာကြောင့်...
ဥရောပသမဂ္ဂအသစ် VAT (VAT) စည်းမျဉ်းများ / IOSS နှင့် OSS ဆိုတာဘာလဲ။
2020 ခုနှစ်အကုန်တွင် ဥရောပကော်မရှင်သည် COVID-1 ကပ်ရောဂါကြောင့် ဇန်နဝါရီလ 19 ရက်နေ့မှ 1 ခုနှစ်အထိ အသက်ဝင်မည့် VAT (VAT) စည်းမျဉ်းအသစ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Corona နဲ့ နိုင်ငံတွေ...
ဇွန်လ 23 2021
Wish Platform မှာ ဘယ်လိုရောင်းမလဲ။
US မှ ဥရောပအထိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce စျေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Wish ပလပ်ဖောင်းတွင် ရောင်းချရန်အတွက် သင်သိထားရမည့်အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် ဖော်ပြထားသော ခေါင်းစဉ်များ၊ Wish ဆိုတာ ဘာလဲ? ဆန္ဒ...
ဇွန်လ 15 2021
Amazon Prime Day- ရောင်းချသူများ အကြံပြုချက်များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည့် Amazon Prime Day ပွဲအတွက် ရက်အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့ပြီး နှစ်ရက်ကြာ ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် ကမ်ပိန်းတွင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်...
ဇွန်လ 8 2021
မက္ကဆီကိုသို့ E-Export လုပ်နည်း။
e-commerce တွင် America နှင့် Canada ၏အောင်မြင်မှုကို အမီလိုက်နိုင်သော မက္ကဆီကိုသို့တင်ပို့လိုသူများအတွက် လမ်းပြမြေပုံအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် ဆွေးနွေးထားသောအကြောင်းအရာများ။ မက္ကဆီကိုတွင် E-commerce ပမာဏသည် မက္ကဆီကိုတွင် အများဆုံးဖြစ်သည်...
ဇွန်လ42021
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် Ebay သည် Payoneer နှင့် သဘောတူခဲ့သည်။
ရောင်းချသူများအတွက် သတင်းကောင်း။ PayPal ပြဿနာသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Ebay တွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ Payoneer ကို ၎င်း၏ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုများတွင် ထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် ebay သည် သင့်အတွက် Payoneer ကို သင့်ရောင်းချသူအကောင့်သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
မေလ 29 2021
E-Commerce နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်လိုအပ်သမျှ။
E-Commerce လမ်းကြောင်းများ 1
နိုင်ငံကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။ 3
မူပိုင်ခွင့်© Propars Blog- E-commerce အကြောင်း အရာအားလုံး။. 2022 • အခွင့်အရေးအားလုံး လက်ဝယ်ရှိသည်။
Koala WordPress အပြင်အဆင် by EckoThemes. ထုတ်ဝေသည် WordPress.